Nyocha nke Gran Turismo Sport, na-alaghachi na mmalite nke Polyphony | Akụkọ akụrụngwa
Nyocha nke Gran Turismo Sport, na-alaghachi na mmalite nke Polyphony
Gran Turismo bu saga nke na-eso ezigbo saga nke ndị egwuregwu ihe karịrị afọ iri abụọ. Anyị na-ekwu na mbipụta mbụ na nke na-akpali akpali nke Gran Turismo bịarutere na PlayStation mbụ, na-ahapụ anyị ka anyị meghee ọnụ anyị n'ihe ga-abụ otu n'ime simulators njikwa mbụ nke na-enye arụmọrụ 3D na-adọrọ mmasị.
Abọchị ole na ole, olee otu ọ ga - esi bụrụ ihe ọzọ, anyị na-anwale ngosi nke Gran Turismo Sport nke ndị otu Sony ji obiọma nye ndị ọrụ ya n'efu, na ndị a abụwo echiche mbụ anyị.
Ihe kachasị njọ banyere demo bụ enweghị obi abụọ na anyị enweela ike iji ya ruo ụbọchị ise, ihe kachasị mma bụ na October 18 ọzọ anyị ga-enwe ọ enjoyụ egwuregwu ahụ ndị họọrọ iji nweta ya. O doro anya na anyị achọpụtala onwe anyị na-eche ihu na eserese eserese nke enwere ike ịtụ anya site na ngwaahịa e mepụtara na iji nweta ọtụtụ ihe na PlayStation 4 Pro, ọ bụ ezie na nke a adịghị adaba na ụdị PlayStation 4 nke na-adịkwa mma.
Ikekwe otu akụkụ na-adịghị mma bụ na anyị ga-ahọrọ oge nke ụbọchị iji na-agba ọsọ, ọ bụghị na -emepụta mgbanwe dị egwu na ihu igwe. N'etiti usoro egwuregwu, arcade ahụ apụla, ọ bụ ezie na n'eziokwu maka ụdị ọrụ a, ọ gaghị aba uru na ị ga-enwe aha nwere mmepe dị mkpa na nke ahaziri dịka Gran Turismo, yabụ anyị na-akwado na ọ bụrụ na ịchọrọ ịgba ọsọ ma ghara ịpịa. nke kachasị mmetụta nke Gran Turismo Sport kwadebere maka gị, ihe kachasị mma bụ na ị họrọ aha site na Mkpa Maka Speed ​​saga, nke eserese abụghị nke ahụ. Nke bụ eziokwu bụ na Gran Turismo Sport ga-ewetara anyị ezigbo ihe mmetụta na ọnọdụ ịme anwansị ya.
Ha ahapụwo anyị mmanụ a honeyụ na egbugbere ọnụ anyị
Nke bụ eziokwu bụ na eziokwu nke obere ndepụta nke ụgbọ ala (gbasara egwuregwu dị ka Forza Motorsports ma ọ bụ ọbụna mbipụta ndị ọzọ nke Gran Turismo) nwere ike ịhapụ anyị uto na-adịghị mma n'ọnụ anyị. Agbanyeghị, ọ dị ka ọ ga-ezuru, yana Anyị enweghị ike ịkọwapụta na Polyphony na-ahọrọ usoro DLC maka ịkwụ ụgwọ mgbe ọ na-agbasawanye ụgbọala ụgbọala ya.
Anyị nwekwara obi ụtọ ịnwale mbipụta Virtual Reality mbipụta, nke a bụ otu nke were akụkụ kachasị njọ. N'agbanyeghị mmetụta ahụ kachasị, nke bụ eziokwu bụ na eserese eserese na karịa inye aka ịnya ụgbọ ala na-egbochi ụzọ anyị si eji ihe egwu egwu egwu egwu, ọ bụ ya mere m ji jiri obi m niile kwenye na usoro kachasị mma iji nwee obi ụtọ Gran Turismo Sport Ọ bụ n'ihu ezigbo telivishọn, nke mere na ndị mmepe nke Polyphony Digital ahọrọla usoro a iji nweta ọtụtụ egwuregwu na njikwa. Anyị anaghị ekwu na ụdị Virtual Reality adịghị mma, mana ọ bụ n'ezie na ụdị a ọ na-enye anyị n'ụzọ izizi.
O doro anya Egwuregwu Gran Turismo na-elekwasị anya na ọnọdụ ọtụtụ egwuregwu, nke mere na o nwere akara ọrụ nke FIA ​​ihe ọ bụla ọzọ na ihe ọ bụla na-erughị. Agbanyeghị, na ngosiputa ahụ anyị ataala ahụhụ dị ukwuu nke mkpọka sava na ọrụ ndị ọzọ nke manyere anyị ịkwụsị ịpịpịa usoro egwuregwu a, yabụ m ga - ahọrọ ịghara ịkọ mpaghara a ruo mgbe anyị nwalere ya nke ọma. Anyị na-eche na Sony na-echebara ọnụ ọgụgụ nke mkpọka na nsogbu ihe nkesa anya, n'ihi na ọ bụ ezie na nke a abụghị FIFA ma ọ bụ CoD, nke bụ eziokwu bụ na ọnọdụ ziri ezi nke ndị sava ahụ ga-ekpebi ụzọ anyị si eji ụdị ntanetị ha.
Gbanyụọ-piste Gran Turismo Sport na-enye ọnụ ọgụgụ karịrị akarị, yabụ ị ga - etinye oge dị ukwuu nke oge gị ọ bụghị naanị na ịhazi ụgbọ ala, kamakwa n'ịchọpụta injinịa kachasị mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Nyocha nke Gran Turismo Sport, na-alaghachi na mmalite nke Polyphony
Ndụmọdụ iji nweta ọtụtụ ihe na ngwa nbipute gị
Nyochaa ihe nyocha GP90, ọnụ ọnụ na-atọ ụtọ